"Sanad walba gaadhi cusub baan Madaxweynaha ka sugaya!" Cirro Waxa uu diyaar u yahay in uu hantidda maatidda Somaliland ka bakhtiyayso in la dhuuqo kuwo meesha ku jaqaya - Haldoor News | Haldoor News
“Sanad walba gaadhi cusub baan Madaxweynaha ka sugaya!” Cirro Waxa uu diyaar u yahay in uu hantidda maatidda Somaliland ka bakhtiyayso in la dhuuqo kuwo meesha ku jaqaya
Jirritaanka falsafiga ee xisbiyadu waa is-dheelitir, tartan ku dhisan abbuurista nolol-bulsheed fiican iyo keenisteed. Tartankaasi waxa uu ka bilowday fahanka dawladnimo iyo aragtida kaaddirka xisbiga iyo currinta siyaasad iyo mashaariic kolba, nolol ahaan, ka manfac roon dhan walba waxa xisbiga kale uu meesha ku hayo. Sidaas ayuu xisbiba xisbiga kale uu kaga baddiyaa kasbashada bulshada.
Dadka reer Somaliland waxa ay ka dharagsan yihiin in hantidoodii ay iskaga raaxaystaan kolba inta awoodda dawladnimo ka ag dhawi! Maatiddiina ay dhulka ku dhegsan tahay oo aan qaar saddexda wakhti dab loo saarin. Xisbiyadda mucaaradka waxa looga fadhiyaa dhaqan ka baddalan waxaas in ay keenaan.
Cirro ku ye “Sanad walba gaadhi cusub baan Madaxweynaha ka sugaya!” Waxa uu diyaar u yahay in uu hantidda maatidda Somaliland ka bakhtiyayso in la dhuuqo kuwo meesha ku jaqaya si aan sax ahayn damiir ahaan iyo sharci ahaan ba. Waa ay caddahay in waxa u qarsoon ee musuq ahi in ay ka badan yihiin intan uu TV-ga la hor yimid! Waa rajo la’aan hor leh!